36 इंच एलईडी एक्वैरियम लाइट कोर्टल रीफ को लागि China Manufacturer
विवरण:36 इंच एलईडी एक्वैरियम लाइट,36 इंच एक्वैरियम लाइट,कोरल रीफ को लागि एलईडी एक्वैरियम लाइट
Home > उत्पादनहरू > एलईडी एक्वैरियम लाइट > एलईडी रीफ लाइटिंग > 36 इंच एलईडी एक्वैरियम लाइट कोर्टल रीफ को लागि
36 इंच एलईडी एक्वैरियम लाइट कोर्टल रीफ को लागि
माथि 36 इंच एलईडी एक्वैरियम प्रकाश - तपाईंको पैसाको लागि उत्तम मूल्य।
लिड सबैभन्दा लोकप्रिय हो प्रकाश चट्टानको लागि एक्वैरियम , मुख्यतः यसको उच्च ऊर्जा दक्षताको कारणले। अधिक एकाइहरू नियन्त्रित छन् र, मोडेलको आधारमा, तपाईं चाहानुहुन्छ सही रंगमा डायल गर्न सक्नुहुनेछ।
एलईडी एक्वैरियम लाइट कोरल रीफ को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ।
1. ऊर्जा बचत गर्न, कृपया लामो समयमा दीपक प्रयोग गर्नुहुन्न भने कृपया शक्ति बन्द गर्नुहोस्।
2. पानीको बाली वा जहाँ पनि गीला पाउनु पर्ने रोशनीको प्रयोग नगर्नुहोस्, पानी र बिजुली खतरनाक मिश्रण हुन सक्छ।
3. प्रकाश को लागि काम गर्ने वातावरण -30 ~ 40 ℃, 45% आरएच ~90% आरएच।
4. प्रकाश को रक्षा गर्न को लागि, बिजुली स्ट्राइक जब प्लस को शक्ति को कटौती गर्दछ।
5. डन` टच गर्नुहोस् वा हल्का काम गर्दा सार्नुहोस्।
6. उपरोक्त मापदण्डहरू पारंपरिक अनुपात अनुसार (व्हाइट: निलो = 1: 2) अनुसार हुन्छन्, ग्राहकले फरक फरक पर्दैन अनुसार फरक अनुपात रोज्न सक्दछ।
36 इंच एक्वैरियम लाइट को विशिष्टता
एलईडी एक्वैरियम रोशनी एकै समयमा रोशनीको प्रयोगमा सुविधाजनक छ।
हामी डिजाइनर र एलईडी एक्वैरियम लाइट र एलईडी बढानी एक्वैरियम लाइट , ठोस गुणवत्ता को पी roviding लैंप डिजाइन र विनिर्माण मा6साल को अनुभव हो । हाम्रो ग्राहकहरु ले 30 देखि अधिक देशों देखि उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दै छन्।
हाम्रो एलईडी एक्वैरियम लाइटले पेशेवर स्पेक्ट्रमहरू राख्दछ र सारा दिन र चन्द्र चक्रमा सूर्यको प्रकाश परिवर्तनहरू अनुकरण गर्दछ, रिफ, कोरल, माछा आदिको लागि उत्तम लाइट वातावरण सिर्जना गर्दछ।
हाम्रो नेतृत्व गरिएको रेफ लाइटिंग बारे थप विवरणहरू, कृपया इ-मेलहरू वा सिधै हामीलाई कल गर्नुहोस् र धन्यवाद। कुनै पनि समयमा हाम्रो कम्पनीको भ्रमणको लागि गहन रूपमा स्वागत छ र हामी तपाईंलाई उठाउनेछौं।
उत्पादन कोटीहरू : एलईडी एक्वैरियम लाइट > एलईडी रीफ लाइटिंग
300 / W600W / 900W / 1200W / 1500W एलईडी लाइट पूर्ण स्पेक्ट्रम बढ्छ अब सम्पर्क गर्नुहोस्
हाई पावर COB 300W एलईडी संयंत्र बढ्दो प्रकाश अब सम्पर्क गर्नुहोस्
नयाँ डिजाइन उच्च पावर एलईडी बढ्यो अब सम्पर्क गर्नुहोस्
ग्रीनहाउस पूर्ण स्पेक्ट्रम 300W एलईडी बढ्यो अब सम्पर्क गर्नुहोस्
36 इंच एलईडी एक्वैरियम लाइट 36 इंच एक्वैरियम लाइट कोरल रीफ को लागि एलईडी एक्वैरियम लाइट 72 इंच एलईडी एक्वैरियम लाइट 48 इंच एलईडी एक्वैरियम लाइट्स 36 एलईडी एक्वैरियम लाइट 48 इंच एलईडी एक्वैरियम लैंप थोक एलईडी एक्वैरियम लाइट